Inbadan oo ku saabsan Apple Car. Baabuurta korontada ku bilaabanta Canoo iyo Apple ayaa kulmay | Waxaan ka socdaa mac
Inbadan oo ku saabsan Apple Car. Bilowga gaariga korontada Canoo iyo Apple ayaa kulmay
Kahor inta aynaan bilaabin warkan waa inaan si macno leh u dhigno ama aan ogaanno kan gawaarida korontada ku bilaabanta Canoo. Xaaladdan oo kale, ma aha soo saaraha gawaarida korontada ee caadiga ah, waa halkii saldhig ee macaamiisha ugu dambeysa ay ku dari karto naqshad shakhsi ah, gaari gaar ah oo kala duwan.
Kaalay, waxa ay samaynayaan ayaa ah bilaabida matoorrada, baytariga, elektarooniga, makaanikada iyo kuwa kale si hadhow iibsaduhu u doorto bannaanka, gudaha iyo kuwa kale. Nooc saldhig ah oo lagu qabsado wixii naqshad baabuur ah. Dhawaaq fiican sax? Waxay si buuxda ugu habboonaan kartaa waxa inbadan oo naga mid ahi ay ka fikiraan Apple Car soo socota.
Dhawaan Apple waxay shirar qaar la qaadatay Hyundai iyo Mercedes-Benz oo ku saabsan suurtagalka Apple Car, marka laga hadlayo, waxaa jira ilo wareedyo dhowr ah oo xaqiijinaya wada hadaladan sidaas darteedna waxay sii wadaa inay muujiso in shirkadda leh tufaaxa la qaniinay ay rabto inay gasho suuqan ama iskuday.
Lahaansho qarka u saaran wuxuu qirayaa in wadahadaladii u dhaxeeyay labadooda uusan mira dhal noqonin ugu dambeyntiina waxay u muuqataa in doorashadan laga reebay suurtagalnimada Apple Car. Dhibaatadu waxay ku jirtaa maalgashiga ay weydiisteen Apple horumarin. Si kastaba ha noqotee, wararka ku saabsan suurtagalnimada gaariga korontada ee Apple ayaa sii socota inuu ka muuqdo meel walba bilowga sanadka 2o21.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Inbadan oo ku saabsan Apple Car. Bilowga gaariga korontada Canoo iyo Apple ayaa kulmay
Apple wuxuu bilaabay macOS labaad Big Sur 11.2 horumariyaha beta